Dowladda Itoobiya oo soo dhaweysay doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
owladda Itoobiya ayaa soo dhaweysay doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ay ammaan u jeedisay sida ay doorashada u dhacday.
Itoobiya oo ku eedeysay Masar iyo Eritrea inay qeyb ka yihiin rabshadaha dalkeeda ka socda
Dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay dowladaha Masar iyo Eritrea inay ku lug leeyihiin rabshadaha ka socda Gobolada ay degaan Qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada oo ah qowmiyadaha ugu badan dalka Itoobiya.
Dad Fara Badan oo ku dhintay rabshado ka dhacay Itoobiya (Sawirro)
Waxaa sii kor dhaya Dadka ku dhintay Rabshadaha ka socda Itoobiya, gaar ahaan gobolada Oromada, kadib markii kumanaan ruux oo dhigayay mudaaharaad ka dhacay goob ka socday isu soo bax diimeed ay booliska rasaas ku kala eriyeen.
Dibad baxyada ka socda magaalada Gondar ee ay degaan Qowmiyada Amxaarada ayaa la soo warinayaa in lagu dilay dad dhowr ah, markii isku dhacyo dhex mareen dibad baxayaasha iyo ciidamada booliska.
Tiro dad ah oo ku dhintay rabshado ka dhacay Gobolka Oromada ee dalka Itoobiya
Rabshado ayaa ka dhacay Gobolka ay degan yihiin Qowmiyadda Oromada ee dalka Itoobiya, iyadoo rabshadahan uu xoogeystay markii ciidamada booliska iyo dad dibad baxayay ay gacanta isula tageen.
Dadka Itoobiya oo maanta u dareeraya doorashada Guud ee dalkaas
Dadka Itoobiya ayaa maanta oo Axad ah u dareerayaa doorashada guud ee dalkaas, iyadoo Xisbiga talada haya loo saadaalinayo inuu mar kale ku guuleysan doono inuu talada dalka sii hogaamiyo.
Wararka ka imaanaya Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ay isaga baxeen deegaanada Ceel garas iyo Ceel la helay, halkaasoo bilooyinkii la soo dhaafay ku sugnaayeen.
Daawo Sawiro:Kulankii looga hadlayay Arrimaha Qoxootiga Somalia oo la soo Gabagabeeyay
Ra’iisul wasaaraha Somalia, C/weli Sheekh Axmed Maxamed iyo waftigii uu hogaaminayo oo Addis Ababa uga qaybgalaya shir looga hadlayo xal-u-helidda qaxootiga Soomeeliyeed ee ku nool daafaha caalamka ayaa shirkaas ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay.
Madaxweyne Xasan oo la kulmay raysul wasaaraha Itoobiya
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa kulan gaar ah xalay magaalada Addis Ababa kula yeeshay raysul wasaaraha Itoobiya, Hailemariam Desalegn.